Ahoana ny fampiasana tariby sy kojakoja tsy ofisialy amin'ny iOS | Vaovao IPhone
Ahoana ny fampiasana tariby sy kojakoja tsy ofisialy amin'ny iOS
Paul Aparicio | | Fitaovana IPhone, Fampianarana sy torolàlana
Ny ankamaroan'ny mpamaky (sy tonian-dahatsoratra) an'ny Actualidad iPhone dia toa ny vokatra Apple. Ireo vokatra izay tonga aty aminay avy any Cupertino dia mazàna manana endrika tsara sy manome traikefa tena tsara ho an'ny mpampiasa. Fa tsy maintsy ekena fa tsy izay rehetra mifandraika amin'ny paoma dia tsara. Ny "didy jadona" apetrak'izy ireo dia misy lafiny tsara, toy ny fiarovana bebe kokoa noho ny amin'ny rafitra miasa hafa na ny zavatra rehetra, na ny Apple novolavolaina na ny antoko fahatelo, dia miasa amin'ny fomba mitovy amin'izany. Saingy, etsy ankilany, ny fametrahana ny paoma dia mety tsy hahafaly ny mpampiasa foana, satria afaka manery antsika hampiasa kojakoja izy ireo ofisialy na MFi amin'ny iPhone, iPod Touch na iPad.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiezaka izahay hamafa ny fisalasalana maro mifandraika amin'ny kojakoja iPhone, na ireo noforonin'i Apple, na ireo manana mari-pahaizana MFi ary ireo na ny iray na ny iray hafa. Na dia misy zavatra iray aza efa fantatrao angamba: ny paoma kojakoja Izy ireo no lafo indrindra, arahin'ireo manana mari-pahaizana MFi ary avy eo misy kojakoja hafa izay mora vidy kokoa, nefa mampidi-doza kokoa.
1 Inona no maha samy hafa ny fitaovana ofisialy sy ny ofisialy?
2 Inona no hitranga raha mampiasa tariby tsy tany am-boalohany aho handefasana ny iPhone?
3 Ahoana no hahalalana raha tariby na fitaovana fanampiny no voamarina MFi?
4 Miasa amin'ny iPhone ve ny kojakoja tsy vita am-boalohany?
5 Inona no hatao raha toa ka miseho ilay hafatra hoe "Tsy voamarina io tariby na fitaovana io."
6 Fa maninona no tsy avelan'i Apple hampiasa kojakoja sandoka amin'ny iPhone ianao?
Inona no maha samy hafa ny fitaovana ofisialy sy ny ofisialy?
[Apple MFi Certified] 2...
Tsotra ny valiny: depende. Ohatra, misy tariby avy amin'ireo mpanamboatra kojakoja izay tena mitovy, saika marina, amin'ireo ofisialy, fa misy koa ireo hafa izay, hoy ny fitenenana, "toa atody mankany anaty kastanà". Samy manana endrika ovoid na ny atody na ny chestnut, fa na ny akorany na ny atitany dia tsy misy ifandraisany.
Tahaka ny ao amin'ny kojakojan'i Apple toy ny an'ny mpanamboatra hafa, misy zavatra iray azontsika hazavaina: ny orinasa manao fitaovana mahalala tsara ny dingana izay nanaraka hamoronana azy, ny refy ary inona ny teboka malemy. Ny tiako holazaina amin'izany dia hoe raha mampiasa kojakoja ofisialy, toy ny fonony isika, dia sarotra kokoa ho azy ireo ny miteraka fahasimbana amin'ilay fitaovana. Raha mampiasa fitaovana tsy ofisialy isika dia azo inoana fa ity fitaovana ity dia manery ny teboka sasany amin'ilay fitaovana, zavatra izay, raha mitranga izany, amin'ny tranga tsara indrindra dia hikororosy ny teboka sasany aminy.
Raha ny tariby tselatra + iOS, ilay tariby manana puce izay hamantatra raha toa ka ofisialy ilay fitaovana na novokarin'ny orinasa nahazo alalana, izay hanome azy ny mari-pankasitrahana MFi (Made For iPhone). Raha tsy mahatsikaritra puce nekena i iOS dia tsy mandeha izany.
Inona no hitranga raha mampiasa tariby tsy tany am-boalohany aho handefasana ny iPhone?
Ny valiny dia mitovy amin'ny tamin'ny fanontaniana teo aloha: miankina io. Tsy misy zavatra mety hitranga Ary raha ny marina dia izany no mitranga amin'ny ankamaroan'ny tranga. Saingy mety hiharan-doza isika, toy ny sasany amin'ireo voalaza etsy ambony na izay tena matotra kokoa: nisy ny tranga maty amin'ny fampiasana telegrama tsy ofisialy. Tokony ho mazava fa ny antony dia tsy hoe tsy ofisialy izy ireo, fa misy tariby tsy ofisialy izay tena ratsy tokoa, izay mety hiteraka tsy fetezana insulta ary mety hiaina fitrohana herinaratra isika.
Etsy ankilany, ary mametraka ny tenantsika amin'ny tranga ratsy indrindra, tariby tsy misy kalitao mety tsy handoa vola tsara Ary izany dia mety hiteraka boriborintany fohy ary maharitra kely kokoa ny fotoana maharitra ny bateria, noho izany dia tsy ilaina ny mividy kojakoja avy amin'ireo orinasa tsy malaza hampiasa azy ireo amin'ny fitaovana mihoatra ny € 600, sa tsy izany?
Ahoana no hahalalana raha tariby na fitaovana fanampiny no voamarina MFi?
Ny zavatra tsara indrindra azontsika atao hahitana raha tariby na kojakoja no voamarina MFi no jereo ao anaty kaontenera. Araka ny hitanao amin'ny sary, ny fitaovana MFi ankolafy fahatelo dia tsy maintsy misy marika izay hamakiantsika hoe "Namboarina ho" ary eo ambanin'ny "iPod, iPhone, iPad".
Raha te hahafantatra tariby Apple Lightning tany am-boalohany ianao dia tsy maintsy mijery ilay cord put "Namboarin'i Applein California" ary "Assembled in China," "Assembed in Vietnam," na "Indústria Brasileira" amin'ny halavirana 18cm (7 santimetatra) refesina avy amin'ny mpampitohy USB, arahin'ny isa 12 isa.
Amin'ny maha-tendrony azy dia milaza aho fa mendrika ny mividy any amin'ny magazay ara-batana izay mankafy laza vitsivitsy. Ny magazay an-tserasera lehibe indrindra eto an-tany ho ahy dia Amazon, saingy mitantana ny varotra ankolafy fahatelo koa izany, hahafahanay mividy zavatra tsy (toy ny nitranga tamiko, nividy tariby tambajotra toa CAT6 aho ary CAT5e izany). Saingy, etsy ankilany, sarotra kokoa ihany koa ny hitranga amintsika raha vokatra izay novidianay Fitsipika Amazon.
Miasa amin'ny iPhone ve ny kojakoja tsy vita am-boalohany?
Valiny fohy: tsia. Na dia miankina amin'ny zavatra takarina amin'ny hoe "original" aza izany. Ny tena izy dia ireo tariby noforonin'i Apple, fa misy ihany koa ireo tariby tsy tany am-boalohany, fantatra ihany koa amin'ny hoe avy amin'ny antoko fahatelo, miasa tokoa izy ireo. Ho an'ny fitaovana ampiasaina amin'ny iPhone dia mila mahafeno fepetra takiana izy io, izay tsy iza fa ny manana mari-pankasitrahana MFi (Made For iPhone). Raha misy mpanamboatra te hampiasa ny kojakojany amin'ny fitaovana iOS, dia mila mifandray amin'i Apple izy ireo ary mamorona azy araka ny nolazaina tamin'i Cupertino. Vantany vao vita izay rehetra angatahin'i Tim Cook sy ny orinasan'ny mpanamboatra kojakoja, ny fitaovana fanampiny resahina (io iray io) dia hahazo mari-pankasitrahana MFi ary hiasa tsy misy olana.
Amin'izao fotoana izao dia miresaka momba ny kojakoja no resahina, fa tsy ny tariby fotsiny. Misy kojakoja Bluetooth (toy ny headset na mpanara-maso lalao) izay tsy mila fanamarinana MFi hiasa.
Inona no hatao raha toa ka miseho ilay hafatra hoe "Tsy voamarina io tariby na fitaovana io."
Azo antoka fa nampifandray fampiasa amin'ny iPhone na iPad ianao ary nivoaka izao hafatra manaraka izao:
Ity tariby na fampitaovana ity dia tsy voamarina ka mety tsy hiasa amin'ity iphone ity
Ny zavatra voalohany hataontsika raha mahita ny hafatra teo aloha isika dia ny mivavaka mba tsy ho lafo be ilay fitaovana novidintsika. Saingy mety misy ny vahaolana, raha mbola manana ny jailbreak natao tamin'ny fitaovantsika na nametraka kinova mora tohanan'ny jailbreak.
Raha efa vitantsika ny jailbreak, izao fotsiny no hataonay:
Manokatra izahay Cydia.
Mikaroka sy mametraka ny tweak Tohano ny kojakoja tsy misy tohanana 8.
Raha tsy manontany anay ianao amin'ny faran'ny fametrahana, mamerina indray izahay ny fitaovana.
Ary hankafizantsika ny fitaovana tsy ofisialy.
El tweak voalaza es maimaim-poana ary misy ao amin'ny repository BigBoss. Raha vantany vao tafapetraka isika dia afaka mampiasa ireo kojakoja tsy ofisialy toa ny Apple ihany no nanamboatra azy ireo ary hamela anay ny hafatra fa tsy voamarina ity tariby na fitaovana ity.
Fa maninona no tsy avelan'i Apple hampiasa kojakoja sandoka amin'ny iPhone ianao?
Heveriko fa misy antony roa lehibe:
Araka ny efa nolazainay teo aloha, ny iray amin'ireo antony dia ny filaminana, na ny fitaovana na ny mpampiasa. Ny tranga fahafatesan'ny fampiasana kojakoja tsy ofisialy dia santionany amin'ny zavatra mety hitranga raha mampiasa tariby tsy manara-penitra isika, zavatra iray izay nohazavainay ihany koa dia tsy noho izy ireo tsy ofisialy, fa noho ny ratsy fanamboarana azy ireo.
Ho fanampin'izay, araka ny efa nolazainay, izy io dia hiarovana ny fitaovantsika ihany koa, satria afaka mampiasa tariby misy fantsom-piraty "pirate" isika ary azo angalarina ny fampahalalana azontsika noho io puce novaina io.
Ny antony lehibe hafa dia ny vola, mazava ho azy. Raha mividy ny zava-drehetra ao amin'ny fivarotana Apple isika, na amin'ny fivarotana ara-batana na amin'ny Apple Store Online, dia hahazo vola be i Apple. Raha ny marina, ny fivarotana kojakoja dia mitondra tombony betsaka ho an'ny orinasa Cupertino, izay mandray anjara ihany koa ny vidin-javatra.
Mazava fa tsy misy olona te holazaina amin'izy ireo kojakoja ampiasaina, fa ny mividy azy ireo amin'ny Apple dia hadinontsika ny olana. Na dia eny aza, amin'ny vidiny lafo kokoa. Inona ny hevitrao? Tianao ve ny kojakoja natoraly na tsia?
Raha manana olana amin'ny tariby famenoana na kojakoja ianao dia mamporisika anao hijery ireo Fifanarahana tariby iPhone ary ento tsy misy olana na inona na inona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Ahoana ny fampiasana tariby sy kojakoja tsy ofisialy amin'ny iOS
Frodo dia hoy izy:
Rehefa mampifandray tariby "tsy voamarina" aho dia azoko ny hafatra ary dia izay. Izy io dia mameno sy mandrindra tsara ary manana maromaro aho. Ary ahoana ny amin'ny risika? Eny, inona no tianao holazaiko aminao? Tariby io. Izy io dia singa mandefitra, ny zavatra tokana mety hitranga dia ny fiampangana miadana kokoa noho ny ipad satria kely kokoa ny hatevin'ny tariby (ary tsy afaka mivezivezy be loatra ny hamafin'ny tariby). Fa ho an'ny iPhone tsy misy olana. Tsy misy zavatra hafa
Valiny tamin'i Frodo
Ny tariby mandeha amin'ny tselatra dia tsy mandalo mihitsy, eny, izy ireo satria tsy mandeha irery fa ao anatiny dia manana puce misy DRM ary raha tsy voamarin'ny Apple izy dia tsy mandeha na tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Manana tariby aho izay mitsambikina ilay hafatra ary miasa foana, ny hafa kosa mandingana ahy ilay hafatra ary tsy miampanga na afaka mampifanindry ny iPhone koa aho.
Na dia ilay tariby tsy ofisialy izay mitohy mavesatra ao amin'ny iMac 2009 aza dia mijanona tsy manao azy raha ampifandraisiko amin'ny MBA 2014. Apple dia mampiasa teknolojia handrosoana nefa koa mba hanidy kokoa ny tontolo iainany, porofo izany.
Raha resaka risika no resahina dia tsy hampiasa dokotera sinoa mihitsy aho amin'ny famataran'ora sy famantaranandro raha tsy voamarin'ny Apple. Izay rehetra manao izay tadiaviny dia tsy lalaoviko amin'ny famatsiana herinaratra ambany kalitao. Mazava ho azy fa ny tariby iray irery dia tsy hanapotika ny iPhone, fa miankina amin'ny kojakoja inona no lehibe kokoa ny risika.
Apetraho ny anarana feno an'ny tweak anda. Tohano ny Unsupported Accessories 8, izay tsy miseho fotsiny noho ny anarana apetrakao voalohany.
Mamaly an'i mR
Vonona, voafafa tsy nahy aho tamin'ny fotoana nametrahana ny sahy ary tsy tsapako izany. Efa voahitsy ka misaotra betsaka amin'ny fampitandremana 😉
Lahatsoratra tena tsara, nividy tariby Mfi voamarina ao amin'ny Apple aho tamin'ny alàlan'ny marika marika Bolse "natao ho", nylon sy 1,80m, nandany ahy € 18 ary noraisiko satria lava sy mahatohitra kokoa noho ny voalohany.
Ny fanontaniako dia tsara ho an'ny baterin'ny iphone 6 ve ity tariby ity? Miharatsy ve izany satria tsy tompon'andraikitra na mihena ny sarany?
Raha MFi ny tariby dia tsy mila miahiahy ianao, dia handoa azy io ary hiasa toa ny tany am-boalohany. Raha ny faharetana dia efa miankina amin'ny tsorakazo omenao azy sy ny fomba itondranao azy. Miarahaba anao!
Perseus Santa (@PERSEOSANTA) dia hoy izy:
Manontany anao aho: ity ve Tweak mba tsy hivoahan'ny hafatra fotsiny? na ny rafitra mamela ny tariby tsy ofisialy hiasa ara-dalàna; Manana iPhone 5 aho ary nividy tariby maromaro handefasana azy io ary tsy mandeha izy ireo, miseho ny hafatra ary tsy mitondra entana izy ireo dia efa nividy iray tany am-boalohany aho fa tsara ho fantatra raha hiara-miasa amin'ilay tariby ireo tariby hafa.
Mamaly an'i Perseus Santa (@PERSEOSANTA)
Esory ny hafatra ary ataovy amin'ny fomba mahazatra ny fitaovana ampiasaina. Miarahaba anao!
Amin'ny ipod misy jailbreak 7.1.2 dia tsy mandeha izy
Mizara dia hoy izy:
Amin'ny iPhone 5 miaraka amin'ny iOS 8.1 dia tsy mandeha izy io, voamarina.
Valio i Deivid
Amin'ny iPhone 5 dia tsy mandeha izy!
Miaraka amin'ny iphone 5 ios 8.1 jailbreak tsy mamaly
lestatminiyo dia hoy izy:
Voamarina ny tariby Belkin ao amin'ny sary.
Valio i lestatminiyo
Marina, manana aho.
Patufet (@ Batista_78) dia hoy izy:
Salama Nacho, ao amin'ny iPhone 6 ios 8.1, TSY mahomby ilay tweak. Mipoitra hatrany ny hafatra. Misy hevitra ve? Mirary ny soa indrindra!
Mamaly an'i Patufet (@ Batista_78)
Jt Martin dia hoy izy:
Atsaharo ny fivarotana setroka, tsy mandeha izy ..
Valiny tamin'i Jt Martin
Crocosergium dia hoy izy:
Mini iPhone 5C sy iPad misy ny iOS 8.1 mbola tsy manisy akory ny fametrahana an'io tweak io, koa nanandrana ny iPhone 5S iOS 7.0.4 ary tsy nametraka ilay tweak akory aza ho an'ny iOS.
Mamaly an'i Crocosergio
Tetix dia hoy izy:
Izaho dia efa nametraka azy tao amin'ny 7.1 ary tsy mandeha izy ary ankehitriny amin'ny 8.1 na
Mamaly an'i Tetix
Hugo (@hugo_loop) dia hoy izy:
Tsy afaka nanamarina izany aho satria manana iOS 8.1 ary efa namoaka ny iOS 8.1.2 ny paoma, fa ny Support Unsupported Accessories 8 ihany no miasa amin'ny iOS 8.1.1.
Mamaly an'i Hugo 〰 (@hugo_loop)
Chinoco sinoa dia hoy izy:
Na amin'ny IOS 8.1.1 voamarina…. Ity tweak ity dia ampondra !!
Valiny tamin'i Chino Chino
Nividy tariby MFi marika Tough Tests aho, adidy mavesatra izany, tiako ny tariby, saingy rehefa afaka volana vitsivitsy dia nijanona tsy niasa intsony izy io, tonga lafatra ny tariby, miverina ihany aho raha maty ny ipad, misy namana belkin MFi ary ny zavatra mitovy aminy no nanjo azy, avy eo ve ianao mila mividy ny tariby Apple usb? izay manary fako, mora vaky ...
Nametraka azy io tamin'ny Iphone 5 IOS 8.1.2 aho, ary tamin'ny voalohany dia tsy nety tamiko, mandra-pahitako fa tokony handeha any amin'ny Settings -> SupportUnsupportedAcce ... (Tsy mahita zavatra hafa eo amin'ny efijery aho) ary ampivezivezy ny fiasa, ho ahy dia kilemaiko foana aho.
Valiny?: Eny, tsy miseho ny hafatra fampifanarahana tariby, nefa tsy misy koa ilay sary famantarana hoe mamaly izy (tselatra).
Rehefa afaka 5 minitra niaraka tamin'ny tariby nifandray, dia toa hoe raha miampanga ahy io. Tsy fantatro raha ho toy ny tamin'ny kinova IOS teo aloha izay nilazako taminao fa tsy mifanaraka ny fitaovana, fa mbola miadana kokoa kosa izy io.
Mikasika ny maha-izy azy ny tariby Apple, ny marina dia tsy nandoa izany vola izany ho an'ny tariby aho, na dia mamela ahy hameno finday aza izy io, dia miafara amin'ny fanaparitahana ilay plastika / fingotra fotsy izay miaro azy afaka volana vitsivitsy. .
Ny hany zavatra hitako tamin'ny tariby sinoa dia ny solder ny tariby ao anaty ny mpampifandray amin'ny lafiny telefaona dia bolongana, ankoatry ny fiarovana ny fingotra eo anelanelan'ny mpampitohy ity sy ny tariby mamela ny tariby hihodina sy miafara amin'ny fanimbana ny sasany amin'ireo tariby 4 mahatratra ny PCB kely (misy ilay puce malaza) izy ireo indraindray mamokatra hafatra tsy mifanaraka, (indraindray!) mampiditra azy ireo tsara (ilaina ny fahitana tsara ary pulsa tsara kokoa) mandeha tsara indray ilay tariby, saingy indraindray ihany.
Daniel Rubio Rocamora dia hoy izy:
Marina izany, marina i Sergio ... Mamaky miadana fa mamaky ... Misy zavatra!
Efa nieritreritra aho fa tsy afaka mampiasa ireo tariby 10 € 1 novidiko tao amin'ny dealextreme lol.
Valiny tamin'i Daniel Rubio Rocamora
alexck dia hoy izy:
Notsidihiko ny tariby jiro tsy nahazoana alalana ary miasa izany
Mamaly an'i Alexck
Sergio espinoza dia hoy izy:
Vahaolana sasany, izaho amin'ny iphone 6, ios 8.1 miaraka amin'i jb dia tsy nahazo vahaolana, manavao ny ios 8.2 ary tsy misy vahaolana, misy ny olona nampihatra ny antoka ary novan'izy ireo. Satria any Arzantina aho dia tsy afaka manova azy io, mila mandeha any amin'ny firenena miaraka amin'ny fivarotana paoma misy iPhones aho
Valiny tamin'i Sergio Espinoza
Tsy ilaina ny manana ny jailbreak, ny tariby tsy manana puce, ny USB adapter tsy mamela anao hampifandray tariby tsy ofisialy hafa, apetraho fotsiny ny fixer hafa, na marika Samsung na fotsy ary miasa tsy misy olana
Mary J dia hoy izy:
Manana iPhone 4s aho ary efa nividy tariby 2 ary samy tsy nahazo mari-pankasitrahana avy amin'i Apple, miaraka amin'ny iOS 7 dia nampandoa ahy io rehefa novonoiko ilay izy, fa namboariko ho an'ny iOS 8.3 ary ankehitriny dia tsy ampandoavina na hakatona na amin'ny hafa izany. fomba ary tsy manana jailbreak aho. Inona no azoko atao?
Valiny tamin'i Maria J
Frances dia hoy izy:
Ny andro lasa izay tao amin'ny fivarotana kojakoja iray dia nilaza tamiko ilay mpivarotra fa taty aoriana dia tsy hahafantatra ilay tariby tany am-boalohany akory ny iPhone, satria miaraka amin'ireo fanavaozana ny iOS dia holaviny izay tariby, ary izao tsaroako izao, ny iPhone 5S-ko alohan'ny hanavaozana azy ho 8.3 feno tanteraka miaraka amin'ny tariby sinoa $ 1500 shily peso (2 € eo ho eo) fa taorian'ny fanavaozana dia tsy feno intsony. Nilaza izy fa tsy maintsy hafoinao ny fiasa fanavaozana mandeha ho azy, saingy tsy fantatro mihitsy hoe aiza sy ahoana no hanaovana azy 🙁
Chuvi dia hoy izy:
Manana 5S aho, nividy tariby sinoa aho, ary ny sasany miasa ary ny sasany kosa tsy, inona koa, ny sasany miasa amin'ny plug-in fa tsy any amin'ny sasany, ny sasany efa niasa am-bolana ary tonga hatrany amin'ny ramanavy izay tsy niasan'izy ireo, ny hafa kosa Tsy niasa hatramin'ny voalohany Na izany na tsy izany, heveriko fa amin'ny tariby sinoa dia atahoranao fa tsy handeha izy ireo, fa raha tena niasa kosa izy ireo dia manana kalitao betsaka lavitra noho ny voalohany.
Valiny tamin'i Chuvi
Salama namana, mbola azoko ny fanamarihana fa tsy fampitaovana mifanentana amin'izany, inona no azoko atao?
2 volana lasa izay dia nividy Cable «GRIFFIN Premium Flat USB Cable» aho izay niasa tsara ary tsy mijanona intsony izao ary toa tsy mifanaraka amin'ny I Phone 5. teo aloha ny tariby mora vidy tao anatin'ny 1-2 volana dia niseho ny afisy, fa ankehitriny miaraka amin'i Griffin izay vidin'ny $ arg 300 dia manana izany olana izany ihany koa aho. Ny fanontaniana dia hoe raha mahazatra izany sa manana olana amin'ny findaiko I? Gracas
saka chess dia hoy izy:
Fanontaniana iray… inona no mitranga raha mampiasa ny dock tany am-boalohany aho tamin'ny tariby piraty? Ratsy toy izany ihany ve? Satria efa henoko fa ny olana dia ny dock sandoka mandefa voltre tsy ara-dalàna.
Mamaly an'i chesscat
Antonio Flores sary placeholder dia hoy izy:
Nividy boaty herinaratra nandritra ny 5s aho ary nilaza tamiko fa tsy voamarina ilay fitaovana, inona no azoko atao?
Valiny tamin'i Antonio Flores
PatoU dia hoy izy:
Manana Jailbreak 9.1 aho fa tsy mahita tweak hampiasa tariby tsy voamarina. Misy mahalala ve? Ilay voalaza eo am-piandohana dia tsy mifanaraka amin'ny iOS 9.1.
Valiny amin'i PatoU
Mampalahelo fa ny fitaovana lafo vidy toy izany dia manana rafitra famandrihana ratsy toy izany, manana fitaovana misy marika isan-karazany miaraka amin'ny charger misy azy aho hatramin'ny taona lasa ary ireo avy ao Cupertino dia mbola mandeha ihany, ho voadona mafy ka mila manao ilay "original "crap cable izay volana lasa izay? mampalahelo.
Volo Luisa dia hoy izy:
Manana ny iPhone fahatelo, iPad ary solosaina Mac roa aho.Raha miaiky ny tariby tsy vita X izy ireo dia ataon'izy ireo tsy misy ilana azy na dia efa nahavita izany aza. Izany dia nitranga tamiko tamin'ny fitaovana maro. Raha izao no mitohy dia tsy mividy vokatra hafa amin'ny Apple aho. Misy lalan-kivoahana amin'izany fandrika izany?
Valio i Luisa cabello
hahaha tamin'ny tariby fahatelo dia tsapako fa nisy zavatra nitranga …… .. hood tsy maintsy mividy original aho izao. Mandalo ity orinasa ity, tsy mividy an'ity marika ity intsony izy, manana iphone 6 aho
Alex Acostaalex dia hoy izy:
Nalahelo be aho nandre fa nipoaka ilay Samsung. Saingy omaly aho nahita ny sakaizako taloha, Sakafo mahazatra mandra-pitondrako azy mody ary nampifandraisiko tamin'ny iPhone ilay loziko izay ao anaty fiarako (tsy ofisialy)… ary nitabataba toy izany ny telefaona rehefa nanao katsaka pop… DEMONS !!! Eny, saika tsy nitranga izany, fa nanjo ny sakaizako izay niafara tamin'ny famonoana ny varavaran'ny fiarako ary mila mividy tariby vaovao aho satria novakivain'ny iPhone ny tariby sinoa ...
Valiny tamin'i Alex Acostaalex
Heveriko fa amin'ity politika Apple ity dia hajanoko ny mividy ny vokatr'izy ireo. Ny taribin'izy ireo dia ratsy sy lafo vidy. Nandeha nisotro i Apple….
Azafady, fa maninona ireo tariby Original dia fako (ara-bakiteny)? Nampiasa iPhone nandritra ny taona maro aho ary mijaly foana amin'ny olana mitovy amin'izany, tsy maintsy mividy sy mividy tariby ary hatrany am-boalohany aho, ary ara-dalàna ny fampiasana omeko azy ireo, tsy mitaky azy ireo velively aho fa atokisako izy ireo, apetrako ny zavatra arovy izy ireo fa tsy misy, miafara misaraka foana izy ireo satria ?? Ny tena manelingelina ahy indrindra dia mbola manana ny tariby amin'ilay android nampiasako tokony ho 6 taona lasa izay ary toy ny vaovao izy ireo dia mbola miasa ihany, manana tariby aza aho avy amin'ny Nokia miaraka amin'i Symbian, izay tsara tanteraka, saingy ny iPhone tsia, hoy aho tsia Mety hanelingelina ve ny mandoa vola be amin'ny zavatra maharitra roa taona farafahakeliny, nefa amam-bolana fotsiny, maninona no mitranga izany sa misy mahalala ny fomba hanaovana izany? Misaotra anao
diegolom dia hoy izy:
Salama, nividy tariby usb vehivavy ho an'ny ipad (tsy tany am-boalohany) misy lesoka mifanentana aho fa mandeha tsara, ny zavatra tokana izay tsy mifanentana mora amin'ny tariby charger tany am-boalohany, matahotra aho sao hisy ny takelaka anatiny an'ny ipad tapaka, misy mahalala Mety hampidi-doza ve ny manohy mampiasa azy? Misaotra!
Mamaly an'i Diegolom
Juan Rocha dia hoy izy:
Salama daholo. Vao nividy iPhone 6 vaovao tsy misy fangarony aho miaraka amina tariby generika, izay tsy andraisako andraikitra intsony, ka tsy maintsy nividy tany am-boalohany aho ary ny nahagaga dia tsy mandeha izy io; Nentiko tany amin'ny serivisy izy ireo ary nilaza tamiko izy ireo fa tsy nanana na inona na inona napetrak'izy ireo izany ary niasa tamin'ny tariby generika. Te hieritreritra aho fa angamba novaina tamin'ny generika avy eo ny seranan-tsolika izay tsy misy tariby afa-tsy amin'ny tariby TSY AZO. Ny tariby tany am-boalohany ampiasako handefasana ipad ary raha mandeha izy.
Valiny tamin'i Juan Rocha
Luis Mansilla dia hoy izy:
Ilay zavatra "fitiavana / fahasambarana ho an'ny mpampiasa / mpanjifa", ankafizin'ny mogul iPhone, dia fihatsaram-belatsihy. Ny tena fototr'izany dia mahatsapa fitiavana sy fanompoan-tsampy izy ireo…… amin'ny vola, amin'ny fametrahana vidim-bidy; mihoampampana, izay tsy misy lojika sy fahendren'olombelona (amin'ny vidin'ny famokarana), manimba ny tetibolan'ny mpanjifa mahari-po. Tena fandrobana karavato!
Valiny amin'i LUIS MANSILLA
Fidias Munoz dia hoy izy:
Tiako kokoa ireo tany am-boalohany, saingy heveriko fa tokony hanohana sy tsy hivadika amin'ireo mpampiasa tsy mivadika aminy i Apple, na dia bebe kokoa aza miaraka amin'ny kojakoja izay mirona hanimba haingana kokoa, heveriko fa raha manatsara ny vidiny ny olona dia aleony mandoa vola kely kokoa ho an'ny tany am-boalohany, ny olana dia ho an'ny original dia mijanona tsy kely fotsiny, raha tsy betsaka kokoa.
Valiny tamin'i Fidias Muñoz
Manambara ny fanohanan'ny olona an'i Apple manohitra ny FBI ny Poll
Apple dia nandefa Apple Watch 11.6 tapitrisa tamin'ny 2015